I-Conversica: Nxibelelana, Zibandakanye, ukondleze kwaye uQinisekise ukusebenzisa uMncedisi we-AI | Martech Zone
NgoLwesibini, nge-12 kaDisemba ngo-2017 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 15, 2017 Douglas Karr
Ingxoxo ibonelela nge umncedisi wentengiso ozenzekelayo inikwe amandla yisoftware yobukrelekrele. Umncedisi usebenza nje ngomncedisi wentengiso yomntu, ukufikelela kubo bonke abakhokelayo bakho kwaye ubandakanye ngamnye kubo kwincoko yabantu. Abantu bayayithanda kuba umncedisi uyathandeka, unobungane kwaye uyaphendula, ukudibanisa ngokukhawuleza nomntu onokunceda.
Sikwintwasahlobo ye-AI. Ndicinga ukuba kuyo yonke inkampani, inguquko kwidatha yesayensi iya kutshintsha ngokusisiseko indlela esiqhuba ngayo ishishini lethu kuba siza kuba neekhompyuter ezisincedayo kwindlela esinxibelelana ngayo nabathengi bethu. Umphathi weNtengiso uMarc Benioff
Abafowunelwa abancedisayo kwaye balungele zonke izikhokelo ukuze abathengisi bagxile ekuthengiseni kunokuba bakhulise. Olu tshintsho lwenza ukuba zonke izikhokelo zilandelwe kunye nengxelo yexesha lokwenyani ebanjiweyo.
Usebenza kanjani uMmeli weNtengiso oNikwe amandla e-AI
Umncedisi wakho wokuthengisa ngokuzenzekelayo ubandakanya umthengi nje ukuba kufike ukhokelo. Ngokomndilili, iipesenti ezingama-35 zazo zonke zikhokelela ekuphenduleni kumncedisi wentengiso ozenzekelayo. Umncedisi wentengiso ozenzekelayo imeyile ngapha nangapha ngokukhokela, ukondla ngamnye kunye nokwazisa abasebenzi bakho bokuthengisa xa utshintsho lomdla kwiinjongo zokuthenga.
Umncedisi wakho wokuthengisa ngokuzenzekelayo fumana okhokelayo ufuna umnxeba kwaye ufumana elona nani lilungileyo. Kunye nabo isoftware yobukrelekrele Umncedisi wakho wokuthengisa ngokuzenzekelayo uchonga izikhokelo ezikulungele ukubandakanyeka kwinkqubo yokuthengisa kwaye ufumana elona nani lifanelekileyo kunye nexesha elifanelekileyo lokuba umthengisi atsalele umnxeba. Ngokomndilili, iipesenti ezingama-35 zokukhokela zibonelela ngokuthengisa ngokuzenzekelayo ngenombolo yefowuni, ihlala iyiselfowuni. Okona kubaluleke kakhulu, xa abathengisi bakho betsalela umnxeba, abakhokelayo baya kulindela umnxeba wabo.
Umncedisi wakho wokuthengisa ngokuzenzekelayo ukubandakanya izikhokelo ezingasasebenziyo kunye nokuthengisa okuthengisiweyo. Umncedisi wakho wokuthengisa ngokuzenzekelayo unokufumana kwakhona amathuba amatsha okuthengisa kwizikhokelo ze-stale, ukonyusa intengiso kunye nokufumana ixabiso elingaphezulu kwizikhokelo zakho ezikhoyo. Phantse iipesenti ezingama-60 zokukhokelela kwitekhnoloji ye-AI yeConversica isekhona kwintengiso. Umncedisi wakho we-AI unokusetyenziselwa ukuthengisa-ezinye iimveliso kunye nokuqokelela ingxelo ngokwoneliseka kwabathengi.
Nokwandisa ukuthengisa okuzenzekelayo kweCRM izisombululo. Umncedisi wakho wokuthengisa ngokuzenzekelayo unokusetyenziselwa ukuphucula umgangatho wezikhokelo kunye nokuchonga ngcono amathuba okuthengisa avela kwizikhokelo ezenziwe yimikhankaso yokuvelisa imfuno ngezixhobo zokuthengisa ezizenzekelayo ezifana nePardot, UMarketo okanye i-Eloqua.
Izibonelelo zoMmeli weNtengiso we-AI zibandakanya:
Khulula ukuphindisela kwakho ukuthengisa ngokwenyani -Umncedisi wentengiso ozenzekelayo wahlulahlula izikhokelo ezilungileyo kwabafileyo, ke abathengisi baphinde bathethe kuphela nabanethemba lokuthetha nabo.
Landela lonke ukhokelo olunye IConversica ivelisa ngaphezulu kakhulu kumalulwane kubathengisi bakho abathengisayo - kunye nezikhokelo zintsha kunye nezindala- kwaye ngaloo ndlela kunyusa inani labo lezivumelwano ezivaliweyo.
Fumana ingxelo ethembekileyo -Umncedisi wakho uyangeneka, kangangokuba amathemba akhululeke ngakumbi kwaye athembekile kwiimpendulo zabo kunokuba bebeza kuba nazo umthengisi.
Hlanganisa ubukrelekrele beshishini - Amathemba akaphenduli ngokulula kuphela, ekwabelana ngolwazi olubalulekileyo njengeenombolo zefowuni, elona xesha lilungileyo lokufowuna, kunye nenjongo yokuthenga.
Ukuphucula inkqubo yakho yokuthengisa -Umncedisi wakho wentengiso ulandela kunye namathemba kwakhona emva kokunikezela kwintengiso-ukuhambisa ukuqonda kwezolawulo kunye nokwoneliseka kwabathengi.
Sebenzisa umncedisi wentengiso oqeqeshiwe ngokupheleleyo -Umncedisi wakho wentengiso ufika uqeqeshwe ngokupheleleyo, ekhuthazekile ngokupheleleyo, kwaye sele exhotyisiwe ngamava afunyenwe kwizigidi zeencoko zabathengi.
Zama i-Conversica yasimahla Jonga iDemo yokuNxibelelana ngokuBukhoma
tags: aiUmncedisi we-aiUmncedisi we-aiUmncedisi wentengiso ebonakalayokukubhadla okungeyonyaniuncokolaideshbhodieloquauphawuuxoleloumncedisi onokubonaumncedisi wentengiso ebonakalayoIqela lokuthengisa elibonakalayo